Wadaad Muslim ah oo ay xireen ciidamada Kenya oo meydkiisa la helay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 29 December 2014 29 December 2014
Mareeg.com: Meydka wadaad Muslim ah ayaa laga helay deegaanka Embu oo ku yaala waqooyi bari dalka Kenya, maalmo kadib markii wadaadkaasi ay xireen ciidamada dowlada Kenya, iyagoo u kaxeystay goob aan la garaneynin.
Wadaadka oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Cali Qeyr ayaa la sheegay in meydkiisa laga helay goob biyo badan fadhiyaan oo ku taala deegaanka Embu oo 150 KM dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya.
Wadaadka ayaa ciidamada Kenya ka xereen magaalada Gaarisa, oo 367 km dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Nairobi, maalintii khamiista ee lasoo dhaafay.
Qaar kamid ah hogaamiyaasha Muslimiinta magaalada Gaarisa ayaa sheegay in wadaadkaasi ay beegsadeen waxay ku sheegeen ciidamada ka hortaga argagixisada oo ka tirsan ciidamada booliska Kenya.
Dowlada Kenya iyo saraakiisha ciidanka ayaanan wali wax war ah kasoo saarin wadaadkaasi meydkiisa laga helay duleedka deegaanka Embu ee dalka kenya.
Bishii November afarteedii, wadaad Muslim ah oo lagu magacaabayay Saalim Bakari Mwarangi, ayaa lagu dilay magaalada Mombasa ee dalka kenya.
Wadaadkaasi ayaa lala xiriiray ururka Alshabaab ee ka dagaalama dalka Soomaaliya, waxaana lagu eedeeyay inuu dhalinyarada kaga qorayay magaalada Mombasa.
Hay’adaha xuquuqda aadanah ayaa ciidamada booliska dalka Kenya ku eedeeyay inay ka dambeeyaan beegsiga wadaadada Muslimiinta ee dalka Kenya.
Dhawaan waxaa dalka Kenya baarlamaanku meel mariyey sharci muran badan dhaliyey, kaasoo loogu talagalay amaanka dalkaas iyo la dagaallanka waxa loogu yeero argagixisada.
Daawo sawirro la yaab leh oo aan lagu arkeyn meel aan aheyn Hindiya